दुब्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? बिहान दूधमा मिलाएर खानुहोस् यो चीज, पत्तै नपाइ बढ्नेछ तौल - Nepali in Australia
October 17, 2021 autherLeaveaComment on दुब्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? बिहान दूधमा मिलाएर खानुहोस् यो चीज, पत्तै नपाइ बढ्नेछ तौल
काठमाडौँ । फाइबर, भिटामिन बी-६, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जस्ता पोषक तत्वले भरिपूर्ण खजुर स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने गर्दछ।
खजुर शरीरका लागि निकै फाइदाजनक छ। जसलाई सही तरिकाले खान आवश्यक छ। एक दिनमा ५ खजुरभन्दा धेरै खाँदा स्वास्थ्यका लागि नोक्सान गर्न सक्छ। आज हामी तपाईलाई खजुर खाने सही तरिका र फाइदाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
१ गिलास गाईको दूधमा ३ वटा खजुर राखेर उमाल्नुहोस्। उम्लिसकेपछि ग्यास सानो बनाएर त्यसलाई त्यत्तिकै ५ मिनेटसम्म छोडिदिनुहोस् । त्यसपछि बिहान यसलाई मनतातो भएपनि पिउनुहोस्।
के-के छन् त खजुर दूधका फाइदा ?
बच्चाले ओछ्याउनमा पिसाब गर्ने समस्या हटाउँछ। यदी तपाईको बच्चाले राति ओछ्याउनमा पिसाब गर्ने समस्या छ भने बिहान खाली पेटमा खजुरवाला दूध पिलाउनुहोस्। ध्यानदिनुहोस यदी बच्चा ५-१० वर्षबीचको छन् भने उनीहरुलाई १, २ वटा खजुरमात्र दिनुहोस् । १० वर्षमाथिका छन् भने २ वा ३ वटा खजुर दिनसक्नुहुनेछ।
खजुरमा भिटामीन बी–६ भरपुर मात्रामा पाइने गर्दछ। जसले दिमाग तेज हुने गर्दछ।